Imboni Yomshini Wokuhlola Injoloba - Abakhiqizi Bemishini Yokuhlola Injoloba YaseChina, Abahlinzeki
Umshini Wokuhlola Ukusebenza Kwendandatho Yenjoloba ye-ZWM-0320
Umshini wokuhlola ukusebenza kwendandatho yerabha evala uphawu ye-ZWM-0320 uwukulawula okuguquguqukayo kwesivinini, ukuhanjiswa ngomshini, kanye nohlobo lokulawula ngogesi.Isetshenziselwa ukuhlolwa kokusebenza kohlaka lwamathambo olungaphakathi kanye ne-rotary shaft lip seal ehlanganisiwe.
Ibhokisi Lokuhlola Ukuguga le-ZW-P UV
Umshini wokuhlola ubupulasitiki be-WSK-49B ulungele ukukala ipulasitiki yerabha eluhlaza, irabha eyenziwe ngepulasitiki, nerabha exubile.
Umshini Wokuhlola Ipulasitiki we-WSK-49B
Ibhokisi lokuguga le-KY401A
Ibhokisi lokuguga le-KY401A lisetshenziselwa ukuhlolwa kokuguga kwe-oxygen eshisayo yerabha, imikhiqizo yepulasitiki, izinto zokufakelwa kukagesi nezinye izinto.
I-QCP-25 Pneumatic Punching Machine
Umshini wokubhoboza womoya we-QCP-25 usetshenziswa amafekthri enjoloba namayunithi ocwaningo lwesayensi ukubhoboza izingcezu zokuhlola zenjoloba ezijwayelekile nezinto ezifanayo ngaphambi kokuhlolwa okuqinile.Ukulawula umoya, ukusebenza kahle, okusheshayo nokonga abasebenzi.
Umshini wokubhoboza usetshenziselwa ukubhoboza izingcezu zenjoloba ezijwayelekile ngaphambi kokuhlolwa okuqinile kwamafekthri enjoloba namayunithi ocwaningo lwesayensi.Ngezinto ezifanayo, lo mshini ungashaywa futhi.